Otú nyefee music si iphone ka iCloud
E nwere ọtụtụ ụzọ maka nyefe nke music si iphone ka iCloud. Tupu na-aga aka na ngalaba, anyị wee mee ka obere iwebata iCloud maka ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-amaghị nke okwu ahụ 'iCloud'.
Gịnị bụ iCloud?
Back elu site na iPhone ma ọ bụ iPad Iji iCloud
Back elu aka site iCloud
Nyefee mfe music si iphone na kọmputa wihtout iCloud ma ọ bụ iTunes
iCloud na a ojii nchekwa ọrụ, nke na-ulo oru si Apple Inc. Nke a iCloud na-eje ozi nzube nke na-enye ọrụ ka ọrụ nke na-eke nkwado ndabere na mpaghara nke data na ntọala na ios ngwaọrụ. N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu na iCloud bụ maka nkwado ndabere na mpaghara adịghị echekwa music (ọzọ karịa music zụrụ si iTunes ụlọ ahịa, nke nwere ike na-re ebudatara for free ma ọ bụrụ na ka dị n'ime ụlọ ahịa).
Gị music ga-echekwara na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na kọmputa gị. Ozugbo e, i nwere ike uncheck songs ị chọrọ iji wepụ site na ekwentị gị, mgbe ahụ, mmekọrịta wepu ha. Ị nwere ike mmekọrịta ha azụ site rechecking songs na syncing ọzọ.
Iji iCloud, nkwado ndabere na mpaghara nwere ike ga-agwụ agwụ dị ka ndị a.
• Gaa na Ntọala, wee pịa iCloud na-aga Nchekwa & ndabere.
• N'okpuru ndabere, i kwesịrị gbanye mgba ọkụ maka iCloud ndabere
• Mgbe ahụ mkpa ka ị na-aga azụ otu ihuenyo na ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ data ị chọọ kwadoo si selections
• Mgbe ahụ, pịgharịa ahụ na-ala ka Nchekwa na nkwado ndabere na mpaghara enweta ya
• Họrọ nke atọ nhọrọ dị ka e gosiri na screenshot wee pịa Jikwaa Nchekwa.
• Mgbe ahụ obiọma anya na top, n'okpuru isiokwu 'Backups', ma họrọ ngwaọrụ ị chọrọ jikwaa
• Mgbe tapping na ngwaọrụ, peeji na-esonụ maka loading-ewe oge ụfọdụ
• Ị ga-ahụ onwe gị na a peeji akpọ 'Info'
• N'okpuru isiokwu ndabere Nhọrọ, ị ga-ahụ ndepụta nke top ise nchekwa-eji ngwa ọdịnala, na ọzọ button agụ 'Gosi All égwu'.
• Ugbu a, pịa Gosi 'All égwu', ma ị nwere ike ugbu a ịhọrọ nke ihe ị chọrọ ndabere
• Ugbu a, jikọọ gị iPhone ma ọ bụ iPad ka a Wi-Fi mgbaàmà, nkwụnye ya n'ime a ike isi iyi na-ahapụ ihuenyo akpọchi. Gị ma ọ bụ iPhone iPad ga-akpaghị aka ndabere otu ugboro n'ụbọchị mgbe ọ ezute atọ ndị a ọnọdụ.
Iji aka, ị nwekwara ike na-agba ọsọ a ndabere ka iCloud site na njikọ gị iPhone ma ọ bụ iPad ka a Wi-Fi mgbaàmà na mgbe ahụ n'ịkpa usoro.
Usoro a kọwara dị ka ndị a:
• Họrọ iCloud
• Họrọ Ntọala
• The họrọ iCloud wee họrọ Nchekwa & nkwado ndabere na mpaghara ị na-eme
Wondershare TunesGo bụ nnọọ oké ngwá ọrụ maka nzube nke nyefe nke music si iphone na kọmputa. The software eje ozi dị ka a oké nkwado maka ndị mmadụ, bụ ndị na-amaghị nke usoro nke nyefe nke music si iphone na kọmputa. Ngwá ọrụ a na-eme dị ka oké akwado omume maka ndị mmadụ.
4.088.454 ndị ebudatara ya
Usoro nwere ike kọwara dị ka ndị a:
• Mbụ niile, i kwesịrị download Wondershare TunesGo.
• Wụnye ya na kọmputa gị wee jiri eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na-agba ọsọ Wondershare TunesGo
• Ma tupu eme ihe ndị a, i kwesịrị gbanyụọ akpaka syncing na itunes.
• N'ihi na nke a dị mkpa ka ị ẹkedori gị iTunes Library na kọmputa gị. Pịa 'Dezie' na mgbe ahụ họrọ 'Mmasị'. Ọhụrụ window, pịa 'Devices' taabụ. Na mgbe ahụ ị ga-pịa nhọrọ 'Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka'. Mgbe, mechie gị iTunes. The akpaka syncing usoro ga-nkwarụ
• Mgbe na-agba ọsọ Wondershare TunesGo ị ga-ahụ otu nhọrọ 'Iji nchekwa' dị ka e gosiri na snapshot.
• All ị chọrọ bụ pịa ya na mgbe ahụ a kwuo igbe ga-apụta nke-arịọ gị ka họrọ otu folda na kọmputa gị iji zọpụta songs, nke na-pụtara na a ga-agafere na ị na-eme na usoro
• Otú ọ dị, e nwere ụzọ ọzọ nke nyefe usoro. Pịa 'Media' na itinye akara panel window maka music. Wee pịa abịazi nọdụ triangle n'ihi na 'Export ka'. Na ndọpụta ndepụta, họrọ Mbupụ na My Computer. Ị ga-enweta gị faịlụ kpọfere na kọmputa site na ngwaọrụ gị.
N'ihi ya maka zuru ezu usoro, ihe niile ị chọrọ bụ Wondershare TunesGo, Gị iPhone na eriri USB na a na kọmputa na iTunes arụnyere.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ihe banyere wondershare TunesGo, i kwesịrị ileta http: //www.wondershare website / iphone / transfer-music-site-kọmputa na-iphone.html. Ị ga-ahụ nkọwa banyere zuru ezu usoro na na otú i nwere ike nyefee music site na kọmputa na-iphone. Ị ga-enweta zuru ezu ọmụma banyere zuru ezu usoro na ga-enwe ohere nke a ọmarịcha software.
Mmekọrịta iCloud Content ka Android: kọntaktị, ozi, Photos, Oku dekọọ na Ọzọ
Esi nweta iCloud ndabere File na otú Lee Gịnị bụ ihe na iCloud
iCloud Kpọtụrụ Iweghachite: Olee naghachi Ndi ana-akpo si iCloud
Olee otú Hichapụ achọghị ngwa site iCloud?
Anọ ngwọta i kwesịrị ịma ka ndabere gị foto ígwé ojii.
Otú nyefee Music si iCloud ka Android
Olee otú mmekọrịta iCloud Ndi ana-akpo Na Google
Atụmatụ Center: Olee otú Jiri iCloud, iCloud nkwado ndabere na mpaghara iCloud Nchekwa
Olee otú Naghachi iCloud Paswọdu
Ụzọ dị mfe iji Jikwaa iCloud Ndi ana-akpo
> Resource> iCloud> otú nyefee music si iphone ka iCloud